Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Aza variana amin’io fanonganam-panjakana io
Inty sy Nday : Aza variana amin’io fanonganam-panjakana io
Manararaotra toy ny banga mihomehy alina ny tompon’andraiki-panjakana sasany rehefa naresaka tato ho ato indray ity Raharaha fifofoana ny ain’ny filohampirenena ity. Manararaotra mitango lalitra ny sasany. Manararaotra mampiady karajia momba io Raharaha ion y hafa. Dia manararaotra mambabo ny fon’ny filohampirenena hoe manameloka sy fikasan-dratsy sy manohitra izany, ary hoe mankahery ny filoha…. Amin’ny sehatra sasany dia ohatran’ny tsy misy raharaham-piaraha-monina ankoatran’io resaka Fifofoana ny ain’ny filohampirenena io.
Aoka re, ry zalahy ô ! Raharaham-pirenena no atrehintsika. Raharaham-bahoaka no iantsorohana. Aza variana amin’io fa andraikitry ny fitsarana io. Avelao hanao ny asany amim-pitoniana ny fitsarana sy ny mpanao famotorana momba izany.
Hevero ho toy ny tranga amin’ny fiainana andavanandro izany ary zara-asa madiodion’ny fitsarana. Tsy hoe raha mifantoka amin’io koa ny sain’ny mpitsara misahana azy dia hatsahatra sy avela avokoa aloha ny asam-pitsarana hafa. Tsia, samy manao ny tandrify azy avy fa misy fizarana asa ao.
Ao amin’ny fitsarana aza asaintsika miatrika ny asa mifanandrify aminy ny mpitsara tsirairay, ny mpiasan’ny fitsarana amin’ny ankapobeny… ka nahoana ny mpisehatra hafa amin’ny raharaham-panjakana no tsy entanaina sy lazaina hoe “aza variana amin’io fa atreho ny asa andavanandro?” Ny manara-maso, tsy ferana, fa tsy azo atsahatra na avela noho io raharaha io ny asa.
Manomboka amin’ny mpitandro ny filaminana izany. Kendreo hipaka any anivon’ny fiaraha-monina, any amin’ny vahoaka, ny vokatra soa ateraky ny asan’ny mpitandro ny filaminana. Mitohy amin’ny asan’ny sampan-draharaham-panjakana isan-tsokajiny koa izany. Ny mpiantoka ny asa tolotra ho an’ny vahoaka, na ny famatsiana herin’aratra tsy tokony ho tapatapa-dava izany na ny famatsiana rano izay tokony ho lavorary. EO koa ny fisahanana ny fitsaboana ny olom-pirenena. Tsy latsa-danja amin’izany ny fiandraiketana ny fampianarana sy ny fanabeazana ny zana-bahoaka. Ny fandavorariana ny fotodrafitrasa. Ny fijerena ny fanalefahana ny fahasahiranan’ny isan-tokantrano noho ny fahakelezan’ny fahafa-mividin’ny ankohonana isanisany nefa miakatra tsy azo notanana ny vidin-javatra. Ny fiantohan’ny fanjakana ny hevitra sy fikatsahana fomba hanatsarana ny tontolom-pihariana eto; manomboka amin’ny asan’ny mpamboly sy mpiompy, ny mpanjono, ny mpanao asa tanana, ny mpivarotra, ny mpisehatra amin’ny taozavabaventy (indostria), ny mpitrandraka harena satria amin’ny vanim-potoana toa izao no manararaotra manondrana harem-pirenena ny mpandroba isan-tsokajiny eto, sy ny maro tsy ho voatanisa e !
Manamarika izany izahay satria toa tsy miresaka afa-tsy io raharaha fifofoana ny ain’ny filohampirenena io indray tao ho ao ny tompon’andraiki-panjakana ambony ao ka zary manararaotra izany ny ambaratonga sy ny antanan-tohatry ny asam-panjakana.
Tsy hoe tsy te hampivaky loha ny vahoaka amin’io raharaha io koa anefa. Tsia, sanatriavina, fa ampirisihana aza ny tsirairay hanara-maso ny fivoaran’io raharaha io fa etsy ankilany, tohizana sy ampihodinina hatrany koa ny raharaham-bahoaka e !